Plastic imegharị ihe maka ọrụ Machine, Plastic Granulator Machine, Plastic Pelletizer - Purui
plastic pelletizing igwe
ML ụdị plastic pelletizing igwe
ML Single igwe pelletizing igwe
ML Abụọ nkebi pelletizing igwe
SJ ụdị plastic imegharị ihe maka iji igwe
SJ Single ogbo pelletizing igwe
SJ Nkebi abụọ pelletizing igwe
High torque TSSK ngalaba-adiana Ejima ịghasa extruder
PITA karama flakes pelletizing
TSSK compounding igwe
Inyeaka igwe (pelletizing)
plastic igwe igwe
plastic fim ịsa ahịrị
PITA karama flakes saa
HDPE karama flakes saa akara
Inyeaka igwe (saa)
Plastic extrusion igwe
Duru igwe batrị imeghari igwe
Chengdu PuRui Polymer Engineering Co. Ltd bụ otu n'ime ndị na-eduga na-emepụta nke plastic imegharị ihe maka extrusion igwe, ịsa ngwá na yiri inyeaka ngwá na China. N'ime ihe karịrị 500, anyị na-agba agba gburugburu ụwa ma mepụta ugbu a ihe karịrị 1 nde tọn pellets plastik kwa afọ.
Ọtụtụ afọ nke Ahụmịhe
Mpaghara ụlọ ọrụ
Anyị na-anọgide na-akpa àgwà nke ngwaahịa na ịchịkwa nditịm na-amị Filiks, mere ka imewe nke niile ụdị.
Companylọ ọrụ ahụ na-eji sistemụ atumatu dị elu yana ojiji nke njikwa njikwa njikwa mba ụwa ISO9001 2000.
HDPE karama saa akara dị mfe akara The saa akara nwere ike ahaziri ka mkpụmkpụ na carter maka choro. Na asambodo CE. HDPE karama saa akara anyị na-akwakọba ọtụtụ ahụmahụ si n'ezie oru ngo maka ndị ahịa anyị si n'ụwa nile. The HDPE karama na-abịa site omo karama, mmiri ara ehi karama wdg na bales.Our saa akara bụ zuru ezu na bale opener, magnetik separator, prewasher, crusher, esemokwu ịsa na sere n'elu mmiri na-ekpo ọkụ saa, labeelu separator, agba ụdị ...
Video vidiyo: Nhazi Ihe osise: Nhazi ihe: HDPE, LDPE, LLDPE, PP, dị ka ihe nkiri, akpa, flakes, ihe nkiri nkiri, gbasaa ihe nkiri, ihe nkiri na-ada oyi, ihe nkiri ọtụtụ, T-shirt bag cut-offs Foamed PE, EPS na XPS: mpịakọta, akpa, mpempe akwụkwọ, akpa nri, ụgbụ mkpụrụ osisi, kpuchie Achọpụta: PP fiber, raffia, silk, yarn, akpa kpara, akpa jumbo Atụmatụ: Nke a compactor integrated pelletizing usoro uru recycled ihe na-enweghị tupu ịcha Compacting ina onwem na cutter valves, nke na-eji f ...
Usoro TSSK bụ Co-rotating double / Twin screw extruder Ngwa gearbox dị ike karị, ihe nkenke zuru ezu na-enye TSSK usoro mgbanwe na-agbanwe agbanwe na windo arụmọrụ. Anyị na-enyekwa ngwọta nke ọ bụla dịka ihe achọrọ ahaziri. Iche-iche nke modular ịghasa ọcha, orù, gbazee filtration na pelletizing usoro ga-enweta ihe kasị nke gị ego. Nka na ụzụ: Ọdịdị dị elu: Na-ebu ihe ikike nke gearbox> = 13 Nzuzo di elu: Izi ezi nke ...
Single ịghasa extruder imegharị ihe maka iji pelletizing usoro SJ Series bụ otu ịghasa extruder imegharị ihe maka ya pelletizing usoro bụ a pụrụ iche na a pụrụ ịdabere na usoro nke kwesịrị ekwesị ka imegharị ihe na reellementị. Ọ na-agwakọta ọrụ nke plasticization na pelletizing otu nzọụkwụ. Dị ka igwe gbajiri agbaji, karama PP na ite flakes na saa na squeesed akọrọ Pee ihe nkiri, na ABS, PS, eyi si n'efu ahihia pallets, oche, ngwa wdg Ikike nwere ike dị iche iche site na 100-1100kg / h. Akụrụngwa akụrụngwa: 1.For t ...
Ngwaahịa vidiyo: 1000 kg / h HDPE karama na-asacha ahịrị 1 Chain plate chaja 2 Bale opener （4shaft） 3 Magnetic separator 4 Belt conveyer 5 Trommel separator 6 Belt conveyer 7 Prewasher 8 Water filter screen 9 Water tank 10 Belt conveyer 11 Manual sorting platform 12 Belt ebu 13 PSJ1200 Crusher 14 kwụ ịghasa chaja 15 ịghasa chaja 16 Ọkara ọsọ esemokwu saa 17 Washingsa tank A 18 High ọsọ esemokwu saa 19 ịghasa chaja 20 Hot saa 21 High ọsọ esemokwu saa 22 ...
Vidiyo vidiyo: Eyi, ihe nkiri Pee na eyi akpa akpa maka imeghari usoro: 1.Belt conveyer 2.Crusher 3.Horizontal esemokwu ịsa ahụ 4.High speed esemokwu esemokwu 5.Floating tank 6.Swrew Loader 7.Dewatering maching 8. .Floating washer 10. Ga-etinye mmiri ka ọ saa. B.High ọsọ esemokwu saa Ọ e mere ...
13 Afọ Ahụmahụ
Afọ 10 Ahụmahụ
Afọ 7 Ahụmahụ
Mere anyị kwesịrị egweri plas ...
Ihe kpatara na anyi kwesiri imeghari plastik. Plastics dị ezigbo mkpa na anyị enweghị ike ibi na-enweghị ya. Amalitere na achọtara ya na850 na bekee. Ihe karịrị afọ 100, ọ bụ ebe niile gburugburu ụwa. Site na nchịkọta maka nri na nchekwa nchekwa kwa ụbọchị na kemịkal ...
PITA karama saa na recy ...
Zipu karama PET karama Nsa na imegharị ihe maka karama PET na-asacha karama PET karama mgbe anakọchara. PITA na-asa ahịhịa bụ iwepu adịghị ọcha (gụnyere akara nkewa, ikpocha elu karama, nhazi ọkwa, mwepụ ígwè, wdg), belata vo ...
Olee otú ịhọrọ plastic imegharị ...
Nke mbụ, onye ahịa kwesịrị ịkọwapụta ụdị ihe eji emegharị emegharị na ụdị, yana nyochaa ikike imegharị (kg / hr). Nke ahụ bụ isi nzọụkwụ nke imegharị ihe maka iji igwe họrọ. Fọdụ ndị ahịa ọhụrụ na-enwe nghọtahie mgbe nile maka igwe mmegharị plastik, nke nwere ike imegharị ụdị plastik niile. N'ezie, iche ...
plastic film imegharị ihe maka ịsa
A na-eji ihe nkiri plastik akpọrọ ihe onwunwe nke abụọ na ahịa ahịa. Enwere ike iji ihe nkiri a na-emegharị emegharị n'ọtụtụ ebe na imepụta ụdị ngwaahịa dị iche iche. E nwere dị iche na udi, size, mmiri ọdịnaya na-adịghị ọcha ọdịnaya nke n'efu plastic ịse, Na imegharị ihe maka iji ahịa, ...